Mitaky hatramin'ny an-tapitrisa izao noho ny fahasembanana naratra nandritra ny lozam-piarakodia | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ankehitriny dia mangataka vola an-tapitrisany noho ny fanalavoana ratra mandritra ny lozam-piarakodia
Leave a Comment / Blog, fiaramanidina / By Sarah
Araka ny fikarohana isan-karazany, dia hita fa ny fahadisoan'ny olombelona no antony mahatonga ny lozam-pifamoivoizana indrindra. Ny valin'ny fikarohana maro dia namarana fa ny lozam-pifamoivoizana na ny ratra na lozam-pifamoivoizana nahafaty olona tany UAE, dia vokatry ny fahadisoana nateraky ny mpamily saika 80% tamin'io fotoana io.
Ny antony telo mahafaty na fahafatesana amin'ny làlana ao Dubai dia nateraka noho ireo antony lehibe ireo - ny hafainganam-pandeha, tsy manao fehikibo seza ary mitondra fiara rehefa mamo. Amin'ireo lafin-javatra telo voalaza tetsy ambony, ny hafainganana no tena ratsy indrindra! Izy io dia nitondra fahavoazana be noho ny antony hafa. Nilaza ny antontan'isa fa mihoatra ny 40% amin'ireo lozam-pifamoivoizana no niteraka vokatry ny hafainganam-pandeha sy haingana be!
Ny ankizy rehetra na tanora dia tia ny mandeha, dia atahorana ho faty noho ny fiara hafainganam-pandeha. Tena zava-misy izany satria nahitana fa ny ankizy any Dubai dia nampidirina hopitaly matetika noho ny maha-niharan'izany azy lozam-pifamoivoizana.
Fiatoana fiara & fanarenana fiara - Nomery fanampiana
Amin'ny maha-mpamily tompon'andraikitra azy dia tsy maintsy mianatra mitandrina ianao rehefa mitondra fiara. Mila manasongadina ny fitsipiky ny fifamoivoizana amin'ny zanakao ianao. Mianatra ireo ankizy mandritra ny fahitany azy, koa mila mitadidy ianao fa mila manao zatra izay torinao. Raha tsy izany, ny zanakao dia hitsahatra tsy hanaraka ny fitsipika napetrak'izy ireo ho azy, rehefa tsikaritr'izy ireo fa tsy manaraka azy ireo ianao. Ary mety ho mpamily mahay ihany koa ianao, saingy mbola tsy afa-bela amin'ny lozam-pifamoivoizana, noho ny mpamily hafa, izay mety tsy ho tompon'andraikitra firy rehefa mitondra fiara.
Mety hoe very hevitra be ianao tamin'ny lozam-pifamoivoizana ary mila mitady fomba hamerenana izany fatiantoka izany. Noho izany dia mila manakarà mpisolovava lozam-piarakodia ianao. Izy dia hiantoka fa tsy hiahiahy anao ny amin'ny fatiantoka sy ny fahasahiranana tonga amin'ny lozam-pifamoivoizana ianao. Izy koa dia hanampy anao hamantatra ny fomba mora indrindra rehefa miasa ny politikam-piantohana.
Nomeran'ny telefaona vonjy maika an'ny polisy any Dubai
Inona avy ireo fahavoazana tsy maintsy omen'ny orinasa fiantohana?
Tsy misy afa-tsy karazana fahasimbana sasantsasany izay ho voaaron'ny orinasa fiantohana. Tsy maintsy fantatrao hoe inona ireo fahasimbana samihafa mandrakotra mba hanombatanao ny fitakianao. Andao lazaina fa ny A sy B dia olona roa nihaona tamin'ny loza. Nitranga ny lozam-pifamoivoizana noho ny A. Ny orinasam-piantohana izay nokaramaina A dia tsy maintsy manonitra B amin'ny fatiantoka. Andeha hojerentsika hoe inona ny fahasimbana sy fandaniana A tsy maintsy hosaronana.
Isaky ny fandaniana ara-pitsaboana
Ny fidiram-bolan'ny B mety ho very noho ny tsy ahitany ny mandeha miasa mandritra ny fanaraha-maso na fitsaboana any amin'ny hopitaly
Ny tsy fahalemena ara-batana na kilema maharitra
Ny fahaverezan'ny zavatra niainan'ny fianakaviana na ny fiaraha-monina
Ny fahaverezan'ny fanabeazana rehetra, izay ahitana fiofanana na sekoly
Ny fahavoazana ara-pihetseham-po rehetra
Fananana simba rehetra
Ahoana ny lanjan'ny orinasa fiantohana?
Rehefa sendra lozam-pifamoivoizana ianao, ilay olona voalohany izay halehanao dia olona mpiantoka anao. Tsy maintsy holazainao aminy ny momba ny loza ary ataovy ny fitakianao. Na izany aza, efa nanontany tena ve ianao hoe ahoana ny maha mpiantoka iray dia manome lanja ny fahazoana ny ratra? Rehefa te hanonitra ny olona noho ny fahaverezany ianao dia haverinao ny vola very azony noho ny vola laniny. Ahoana anefa no handrefesanao alahelo na fanaintainana na fijaliana? Ahoana raha misy olona handeha hamonjy dinidinika ary sendra lozam-pifamoivoizana izy ireo? Afaka manome lanja ny tombontsoany very ve ianao? Mba hialana amin'ity dia manandrana manome lanja ny fitakiana rehetra ny orinasa fiantohana amin'ny alàlan'ny vinavina hamaritana ny fahasimbana.
Rehefa manomboka mifampiraharaha amin'ny orinasa fiantohana momba ny fitakianao ianao dia manombana aloha ny mpandinika ny fandaniana ara-pitsaboana izay mifandraika amin'ny ratra fotsiny. Hijery ny lafiny rehetra izy ary avy eo hamintina ny fandaniana amin'ny lohateny hoe 'fahasimbana manokana ara-pahasalamana'. Raha vantany vao tafapetraka io tarehimarika io dia hiezaka ny mpandrefy tombana hanombatombana ny vola tsy maintsy aloan'ny orinasa fiantohana amin'ny mpangataka noho ny fahoriany sy ny fijaliany. Ity vola ity dia antsoina hoe 'General Damages'. Mampiasa rafi-pikajiana izy hikajiana ny fahasimbana ankapobeny, izay mifototra amin'ny haavon'ny ratra nahazo ny fitakiana. Raha manana ratra kely ny mpangataka dia mitovy amin'ny 1.5 na 2 heny amin'ny sandan'ny tombam-pahasalamana manokana ny sandan'ny fahasimbana ankapobeny. Raha lehibe ny ratra, ny sandan'ny fahasimbana ankapobeny dia mitovy amin'ny in-5 ny sandan'ny fahasimbana manokana amin'ny fitsaboana. Misy tranga sasany mety ho 10!
Rehefa ny orinasa fiantohana dia mandà tsy handoa maratra amin'ny loza
Misy tranga tsy maintsy omen'ny orinasa fiantohana ny fangatahanao miaraka amin'ny fiverenany. Ny antony lehibe iray amin'izany dia ny maha tompon'andraikitra anao dia tsy afaka mametraka porofo lehibe na misy loofoles ny politikanao, izay tsy voamarikao rehefa nanao sonia ianao. Noho izany, tsara kokoa ny manakarama mpisolovava fiantohana ahazoana fifanarahana ara-drariny.
Tandremo rehefa tafiditra amin'ny antontan-taratasy izany
Alohan'ny fisoratana anarana momba ny politika fiantohana, mila antoka ianao hamaky ny lafiny rehetra amin'ny politika. Raha tsy nahavita namaky ilay printy tsara ianao, dia mety ho tonga faran'izay maintso ny fifanarahana. Efa nisy ny raharaha tsy nahazo ny resin'izy ireo, satria tsy fantatr'izy ireo ny lafiny sasany amin'ny politika. Iaraho midinika amin'ireo lafiny mampiavaka ny politikam-piantohana miaraka amin'ny mpisolovava alohan'ny hanoratana ny tsipika fambara.
Fa maninona no mila manakarà mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana ianao?
Tahaka ny ankamaroan'ny cites lehibe, dia tsy vahiny amin'ny lozam-pifamoivoizana ihany koa i Dubai. Amin'ny ankamaroan'ny tranga lozam-pifamoivoizana dia mazàna ny fahavoazana ny fiara. Moramora kokoa ny orinasa fiantohana hamerina ny fahasimbana ateraky ny fiara. Saingy, amin'ny tranga sasany dia misy ny fahavoazana be dia be vokatry ny ain'olombelona, izay mety hiteraka fahavoazana be dia be sy fahasimbana ara-bola be. Tsy afaka mametraka vidiny amin'ity fahaverezanao ity ianao ary noho izany dia hifampiraharaha amin'ny orinasa fiantohana, mila mpisolovava lozam-pifamoivoizana ianao manana traikefa hiatrehana izany toe-javatra izany. Rehefa tafiditra amin'ny lozam-piarakodia ianao, dia tsy maintsy onitra amin'ny faktiora ara-pitsaboana, very karama, fanamboarana fiara ary karazana fahasimbana hafa izay nitranga. Ireo fehezanteny ireo dia tena nohadinin'ny mpisolovava matihanina.
Tsara foana ny manana mpisolovava satria ho afaka hiatrika izay olana ara-dalàna izay mety hiakatra izy ireo. Afaka mifampiresaka tsara amin'ny orinasa fiantohana ihany koa izy ireo amin'ny alàlan'ny fanatrehanao mandritra ny fivoriana.
Tsara foana ny misoratra anarana amin'ny serivisy ho an'ny mpisolovava rehefa nisy ny toe-javatra voalaza etsy ambany.
Mandritra ny ratra maharitra na tsy maharitra
Misy lozam-pifamoivoizana ateraky ny ratra izay misy fiatraikany amin'ny fahaizanao manao hetsika ara-batana ary miteraka kilema mandalo na maharitra. Sarotra ny mamantatra ny onitra tokony ho azonao noho ny ratra toy izany. Tsara foana ny manana mpisolovava eo anilanao mandritra izao toe-javatra izao.
Ny faharatran'ny ratrao dia ho jeren'ny orinasa fiantohana alohan'ny hanapahany ny vola vidiny. Ny fahasarotana dia mazàna mifototra amin'ny volanao ara-pitsaboana, ny ratra nahazo anao ary ny fotoana nitondranao azy ho sitrana amin'ireto ratra ireto. Azo inoana fa ny haben'ny fiantohana omena fiantohana anao dia tsy manampy anao hamerina ny fandaniana ara-pitsaboana anao. Izao dia mila mila mpisolovava amin'ny tananao ianao hanampy anao handresy ny fahaverezanao.
Tsy misy mahafantatra ny ratra na ny fahaverezanao tsara noho ianao!
Ity no zavatra tokony hotadidinao! Ny loza nitranga teo aminao izany fa tsy tamin'ilay mpisolovava na mpampiasa anao! Ianao no nahita ny fisehoan-javatra fa tsy izy ireo! Ianao no mahalala izay ratra nataonao. Ianao no mahalala ny zava-nisy! Ity dia zavatra mila ilainao alohan'ny hieritreretanao ny fametrahana fitoriana.
Rahoviana ianao no tokony handray mpisolovava amin'ny lozam-piarakodia?
Mila mametraka ny fitakianao ianao alohan'ny handefasanao ny fe-potoana ho an'ny fanjakana izay ipetrahanao. Tsara foana ny manakarà mpisolovava amin'ny voalohany. Izany dia hiantoka fa tsy hisoroka ireo lesoka mety mety aminao any aoriana any. Izy ireo dia hiantoka fa tsy ho very vola ianao ary tsy mandoa ny vola mivoaka amin'ny paosinao, ary na dia manao izany aza ianao, dia mahazo valim-bola mitovy amin'izany ianao. Tsara foana ny mifandray amin'ny mpisolovava anao ao anatin'ny herinandro taorian'ny loza satria hanome fotoana tsara anao izy io mba hifandraisana amin'ny orinasanao amin'ny fiantohana!
Ohatrinona ny saran'ny mpisolovava amin'ny lozam-piarakodia?
Isaky ny tranga lozam-pifamoivoizana dia miasa amin'ny hevitra fa tsy voaloa ilay mpisolovava raha resy ny raharaha fa alaina izy raha toa ka mandresy. Raha mandresy ity raharaha ity amin'ny mpisolo vava ny mpisolovava, dia voaloa isan-jatony ny fahavoazana ho an'ny ratra manokana (izay ampidirina aminao ho 'Medical Special Damages' ao amin'ny fizarana eo no ho eo).
Fantaro izay ambaran'ny fangatahana anao amin'ny alàlan'ny fifampidinihana maimaimpoana
Sarotra foana ny hahafantatra izay atolotry ny fitakianao. Mila mandalo dingana lava be ianao amin'izany. Eto ianao dia omena tombony amin'ny fifampidinihana amin'ny mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana hahafantarana bebe kokoa ny momba anao. Ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny consultation maimaimpoana. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mamantatra ny mpisolovava mety aminao. Mila mahita olona manana traikefa ampy amin'ny lalàna ianao raha resaka lozam-pifamoivoizana. Hanampy anao hahafantatra ny hevitrao matanjaka sy hiady amin'ny tranga misy anao amin'ireo tranga ireo! Alefaso ny fitakianao